A malitere itinye Zigana Mountain Tunnel Project | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèA malitere imejuputa atumatu Zigana ugwu
19 / 05 / 2014 ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ
A malitere itinye Zigana Mountain Tunnel oru: General Directorate of Highways na 10.Bölge kpebiri itinye mmemme dị mkpa na Trabzon.
E nwere oru ohuru n'okpuru Zigana Mountain na shelves nke Regional Directorate of Highways. Ihe gbagotere, malitere ịdị ndụ. Okporo ụzọ dị na Trabzon, ikike ikike kachasị elu kwuru okwu. 13 kwuru na owuwu kilomita nke ga-ebido na njedebe nke afọ. A ga-emecha 3 zuru ezu n'ime afọ. Little ga-abanye Ma willka ntakịrị oge gafere ma pụọ ​​n'akụkụ dị nso na Torul.
Director General nke Highways of anyị ụmụ amaala ibe nke Turkey na region kpuchie site ọwara. Ọ ga eji okpu Zigana kpuchie ya okpueze. Thebọchị mmeghe nke oghere Zigana, nke bụ ego dị mkpa site na mmeghe nke Trabzon ruo na ndịda, bụ njedebe nke 2004. Aterlọ ihe nkiri Statelọ ihe nkiri a kacha mara amara na Trabzon bụ ngbanye ọkụ dị n'ihu. E mepụtara ihe ngwọta maka ụzọ a ga-esi na-agbakọta.
Ọwara ahụ ga-abanye na njedebe nke ọdịda Erdoğdu Varlıbaş ga-esonye n'ọwara ahụ agaghị echere oriọna ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ ala ndị na-aga n'okporo ụzọ awara awara Demenirmendere Değirmendere'ye enweghị ike ijikọ. N’ebe a, a gwala anyị na amalitela ọrụ na iwepụta njikọ. Na mgbakwunye, a na-arụ ọrụ na Kanuni Boulevard kilomita nke 26. Ka a na-egwu ọwara Boztepe, a na-arụkwa ọrụ na ọwara Bah .ecik. A na-atụ anya ka onye ọrụ ngo ahụ mezue usoro iwu ya tupu oge a tụrụ anya ya.
New Zigana Tunnel Project Emecha
Ịchọ Ọwara Ọhụrụ n'Ugwu Zigana
Ezigbo Zigana abụghị nrọ egwu nke ndị ọkwọ ụgbọala
Ogige Zigana ka iku ume Oké Osimiri Uhie
Mgbe Ovit New Zigana Ọwara ga-fọdụrụ n'ezinụlọ na Turkey
Ọṅụ nke Zigana Tunnel na Gümüşhan
Enweghị njirimara nke JCC na Oghere Zigana
Oziọma si n'aka Minista Isik ka Gumushane
Na-enwe obi ụtọ maka Osisi Zigana
Pasent 65 nke Zigana Tunnel Construction agwụla
Osimiri Ugwu Manisa Ụgbọala Na-eme Ndụ
arụ ọrụ ọwara mmiri
Anyị mezuru Ụkpụrụ Ụwa n'Ụlọ Ụzọ
Haziri Osman Gazi Junction